AKW MAKWỌ AKW HEKWỌ AKW HEKWỌ AKW --KWỌ - Okwu Ugbu A
Okwu na ịdọ aka na ntị
Ihe na April 12, 2016 April 17, 2017 by Mark
Ọtụtụ ndị gụrụ akwụkwọ ọhụrụ abatala n’ọnwa ole na ole gara aga. Ọ bụ na obi m iweghachi taa. Ka m na-aga laghachi ma gụọ nke a, enwere m ụjọ mgbe niile ma ọ na-emetụkwa m n'ahụ mgbe m hụrụ na ọtụtụ n'ime "okwu" ndị a - ndị a na-enwetakarị na anya mmiri na ọtụtụ obi abụọ - na-emezu n'ihu anyị…
IT Anọla m n’obi m ọtụtụ ọnwa ugbu a iji chịkọta maka ndị na - agụ akwụkwọ m “okwu” na “ịdọ aka na ntị” nke m chere na Onye-nwe agwala m okwu n’ime afọ iri gara aga, ma bụrụkwa nke mere ma deekwa ihe odide ndị a. Kwa ụbọchị, e nwere ọtụtụ ndị debanyere aha ọhụrụ na-abịa n'ụgbọ na-enweghị akụkọ ihe mere eme na ihe karịrị otu puku ederede ebe a. Tupu m chịkọta “mkpali” ndị a, ọ bara uru ikwughachi ihe Churchka kwuru gbasara mkpughe “nkeonwe”:
Dbọchị abụọ ọzọ
Ihe na October 15, 2010 November 15, 2017 by Mark
DABỌCH OF NWOKE - NKE AB IIỌ
THE ekwesighi ighota okwu nke bu “ubochi nke Onye-nwe-ayi” dika “ubochi” nke ozo. Kama,
N’anya Onyenwe anyị otu ụbọchị dị ka otu puku afọ, otu puku afọ dịkwa ka otu ụbọchị. (2 Pt 3: 8)
Lee, ụbọchị nke Onyenwe anyị ga-abụ otu puku afọ. Ka nke Banabas, Ndị Nna Chọọchị, Ch. 15. XNUMX
Omenala ndị Fada Chọọchị bụ na "enwere ụbọchị abụọ" ka fọdụrụ maka mmadụ; otu n'ime ókè nke oge na akụkọ ihe mere eme, nke ọzọ, na-adịru mgbe ebighị ebi ma ebighi ụbọchị. Thebọchị na-esote, ma ọ bụ “ụbọchị nke asaa” bụ nke m na-ekwu maka ya n’akwụkwọ ndị a dịka “Oge Udo” ma ọ bụ “ụbọchị izu ike izu ike,” dịka ndị Fada na-akpọ ya.
Thebọchị izu ike, nke na-anọchi anya mmezu nke ihe okike mbụ, anọchila ụbọchị ụka nke na-echeta ihe okike ọhụrụ nke Mbilite n'Ọnwụ nke Kraịst malitere. -Katkizim nke Chọọchị Katọlik, n. Ogbe 2190
Ndị Fada hụrụ ya na ọ dabara adaba na, dị ka Apocalypse of St. John si kwuo, na ngwụcha nke “okike ọhụrụ,” a ga-enwe ezumike “ụbọchị nke asaa” maka Churchka.
Nnukwu ihe na-emeghe
Ihe na January 4, 2009 March 11, 2020 by Mark
Michael na-echebe Chọọchị, nke Michael D. O'Brien dere
Enwere m ndị enyi m, m na-edetara gị akwụkwọ mgbe niile ugbu a, ihe dị ka afọ atọ. Ihe odide ndị ahụ kpọrọ Petals kpụrụ ntọala ahụ; ihe Opi nke ịdọ aka na ntị! na-agbasa iji gbasaa echiche ndị ahụ, na ọtụtụ akwụkwọ ndị ọzọ iji mejupụta ọdịiche dị n'etiti; Ọnwụnwa asaa nke afọ usoro a bu nnoo mmekorita ederede ndia di n’elu dika ihe uka uka si di bu na aru ga-eso isi ya n’okpukpe nke ya.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Na Nzọụkwụ Ya
Ihe na March 21, 2008 November 21, 2017 by Mark
Kraịst na-eru uju, nke Michael D. O'Brien dere
Kraist nabatara uwa dum, ma obi ajuru oyi, okwukwe adighi nma, ime ihe ike na abawanye. Cosmos reels, ụwa nọ n'ọchịchịrị. Ugbo ala, ozara, na obodo nke mmadu adighi enwe nkwanye ugwu nye obara Nwa aturu ahu. Jesus ofụhọ aban̄a ererimbot. Olee otú ihe a kpọrọ mmadụ ga-esi teta? Kedu ihe ọ ga-ewe iji kpochapụ enweghị mmasị anyị? - Akwụkwọ bụ́ Artist’s Commentary
THE ebum n’uche ihe odide a nile sitere na nkuzi nke Uka na aru nke Kraist ga eso Onye-nwe-ya, Onye Isi, site na oke nke ya.
Tupu ọbịbịa nke abụọ nke Kraist, Chọọchị ga-agabiga ikpe ikpe ikpeazụ nke ga-eme ka okwukwe nke ọtụtụ ndị kwere ekwe… Chọọchị ga-abanye n'ebube nke alaeze naanị site na ngabiga ngabiga ikpeazụ a, mgbe ọ ga-eso Onyenwe ya na ọnwụ ya na Mbilite n'Ọnwụ. -Catechism nke Chọọchị Katọlik, n. Ọnwa Iri na Abụọ 672, 677
Ya mere, achọrọ m itinye ihe odide m kachasị ọhụrụ na Oriri Nsọ.
Ihe na September 5, 2007 March 24, 2020 by Mark
TUPU M debere maapụ nke ihe odide ndị a n'okpuru ebe ha meghere n'afọ gara aga, ajụjụ bụ, kedu ebe anyi ga ebido?